Amaqiniso ethakazelisayo izindlovu. Bangaki uhlala indlovu ngokwemvelo
Indlovu - ezweni esincelisayo esikhulu kunazo. Namuhla, kunamabandla amathathu izinhlobo zezilwane: indlovu Indian, le savannah Afrika nehlathi Afrika. Ubuningi eqoshiwe indlovu isisindo 12 ku-240 kg, kuyilapho isisindo umzimba isilinganiso lezi zilwane - angaba ngu-5. Futhi yini enye ingabe uyazi amanye amaqiniso athakazelisayo mayelana nezindlovu? Ufuna ukufunda ngalezi zilwane manje? Khona-ke ufunda.
indlovu Koze bukhoma?
On isilinganiso sobude bokuphila sendlovu kuthonywa nemibandela yawo. Ngaphansi kwezimo zemvelo, izilwane njalo ebhekene nezingozi, isomiso esithile kanti nabazingeli abangekho emthethweni ngokubulala izindlovu ngamazinyo azo ezibalulekile. izindlovu esincane eminyakeni 8-10 ubudala ayikwazi bazivikele bebodwa futhi esimweni unina washona ngephutha ngesikhathi izilwane ezidla ezinye ukufa. Bangaki uhlala indlovu emvelweni? Isilinganiso sokuphila indlovu kuyinto ngu-60 kuya kwengu-70.
Ngesikhathi esifanayo, phakathi kwezilwane abahlala ekuthunjweni kuthiwa eyikhulu ezaziwa. Indlovu endala okuthiwa Lin Van wachitha iminyaka 86 (1917-2003 GG.). Waba khona Okwesibili Sino-Japanese War, bese kwakhiwa ngazo ezikhumbuzo e esekisini, kodwa ingxenye enkulu yokuphila kwakhe e-zoo e Taipei eTaiwan. Lin Van sasitholakala kuyi Guinness Book of Records njengoba indlovu, okuyinto waqopha wahlala ekuthunjweni.
isikhathi esingakanani kanti ukukhulelwa sendlovu?
Ngokuthakazelisayo, indlovu ivundile izinsuku ezimbalwa kuphela ngonyaka, naphezu kweqiniso lokuthi kokuzalela phakathi kwezilwane unyaka wonke kungenzeka. Iqiniso Okumangazayo futhi kungakanani sokukhulelwa ihlala indlovu. Kulesi sisekelo kanye nezilwane ezinkulu ezincelisayo yizona Amaqhawe phakathi kwazo zonke izilwane emhlabeni. nabesifazane Ukukhulelwa ihlala izinyanga 22, okungukuthi, cishe 2 iminyaka.
Emva kwalesi sikhathi, ukukhanya livela indlovu, okungase uyibize ngokuthi encane. Isisindo pup Indlovu 120 kg. Zokubeletha ngokuvamile kuxazululwa ngaphandle izinkinga. Izingane azalwe eyimpumputhe futhi ngokuvamile ncela ngemiboko yazo, njengoba indoda - isithupha. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi unamandla kangakanani noma indlovu umntwana ezalwa, kuba impela isilwane olungenakuzisiza ukuthi udinga ukuvikelwa ezilwaneni ezidla ezinye izilwane. Kuphela ngaleso yobudala eyi-15, lesi silwane isingumuntu omdala futhi kungadala emikhaya yabo.
Zingaki ukudla indlovu?
Endaweni yazo yemvelo ekudleni indlovu siqukethe amahlamvu notshani, equkethe iphesenti eliphezulu umswakama. Kuye ngesizini nesomiso kanye nezimvula ezinkulu, kungase futhi udle amagxolo izithelo izihlahla ehlukahlukene kanye nezihlahla. Banikezwe ngobukhulu besikhumba saleso silwane, akumangalisi, njengoba indlovu idla. Futhi lokhu, uchitha amahora angafika ku-16. Nsuku zonke, isilwane esidla 45 kuya 450 kg ukudla isitshalo, ngokwesilinganiso - mayelana 300 kg.
Ngakho kakhulu indlovu odlela kuleyo zasendle. Esikhathini eyisithunjwa ofanayo ukudla kwazo kuhlanganisa hay (30 kg), izaqathe (10 kg) nesinkwa (5-10 kg). Futhi, bangase ukunikeza corn nokumbiwa ne vitamin izakhiwo ezahlukene, isinxephezelo yokuntuleka umsoco. Izindlovu baphuze mayelana 100-300 amalitha ngosuku. Uma isilwane iqala ukuba baphuze ngaphezulu, njengoba umthetho, lokhu kuwubufakazi bokuthi yisiphi isifo. Ngo sofuba indlovu ziphuze kuze kufinyelele amalitha 600 amanzi ngosuku.
Wendlovu, eyangaba nezindlebe
Yini mayelana isiqu indlovu laziwe? Sethula amanye amaqiniso athakazelisayo ngalesi umzimba:
isiqu liyingxenye ekhaleni sendlovu, kodwa akanawo amathambo acinene;
isiqu eside futhi nezimo siqukethe imisipha 150,000 ezahlukene ewuphethe;
nge indlovu isiqu kungaba ncela futhi 1 kuya ku-8 amalitha amanzi ukuze ke ulithumele emlonyeni;
indlovu ukusetshenziswa isiqu isilwane kuphela amanzi isethi, kodwa ungaphuzi ke (uma wazama ukuphuza ke, bekuyoba kubangele reflex ukukhwehlela njengasezulwini abantu);
ngosizo isiqu i wendlovu lingenza izimpahla ezingamathani angu-350 ukudla;
Wendlovu ubude mayelana 150 cm;
sibonga isiqu i wendlovu kalula ukuwela umfula ezijulile - lesi sitho kuyinto esakhelwe-mpilo tube zabo, ichopho lapho ubambe amanzi, kuyilapho yomzimba zifakwa ngokuphelele emfuleni.
Ukuze ukumba futhi ephakamisa izindlovu zisebenzisa hhayi kuphela isiqu, kodwa futhi eyangaba. eyangaba Ubude kwezindlovu zase-Afrika bengase bazikhandlele 2.5 m, futhi isisindo - 100 kg. Uma silele, indlovu endala ubeka eyangaba yayo phezu amagatsha emithi noma ehlathini, ekuthunjweni futhi Kubabeka ukuvuleka ngehele noma odongeni.
Omunye indlebe sendlovu ukala 85 kg. Le ngxenye yomzimba kuyinto thermostat kakhulu. Lapho izinga lokushisa ifinyelela 40 ° C no-hot isilwane, ngenkuthalo wendiza izindlebe like ophephela. Esikhathini indlovu imvula imimoya enamandla, kunalokho, ngokuqinile ngazo ezindlebeni ekhanda.
Ingabe izindlovu esabe amagundane?
Isitatimende ukuthi izindlovu besaba amagundane, uvele endulo kuze sefilosofi esingumRoma uPliny Omdala. Kwelinye imisebenzi yakhe, wabhala ukuthi ngaphezu kwanoma yimuphi omunye isilwane izindlovu esabe amagundane kanye amagundane.
Izazi zanamuhla waphikisa ngokuphelele kuvulwa "nozakwethu" yakhe. Ukulitadisha kwabo baye babonisa ukuthi indlovu nezimpuku lalingabulawa kalula abahlala khona, uma hhayi omunye "kodwa." Iqiniso ukuthi indlovu iyisilwane evilaphayo casula iyiphi kuvevezela esiqondisweni sakhe. Ngisho noma nje uya ukusebenzisa ngenja noma inyoka ukukhasa ngokushesha - ke kuzokwenza kube ukukhathazeka okukhulu. Uma umbukiso indlovu ngokuthula ehlezi igundane uhlangothi, yena akasabeli, futhi uma zapolzet ebhuthini, indlovu kuvele angamthintitha esithubeni nje.
Ngenxa yalokho, ososayensi baye bafakazela ukuthi izinsolo ukuthi izindlovu besaba amagundane, kuphela inganekwane.
Izindlovu sizibangela uqaphele futhi owayevelele esibukweni, kanye amahlengethwa nezinhlobo eziningana izimfene. Izilwane ezifuywayo ungomunye ohlakaniphe kunabo bonke emhlabeni.
Amaqiniso ethakazelisayo izindlovu, okufakazela izinga labo okusezingeni eliphezulu intelligence:
ingqondo yabo ukala 5 kg, futhi ingaphezulu ukuthi nezinye izilwane.
Izindlovu bayakwazi ukubonisa imizwa, kuhlanganise injabulo, usizi, nobubele. Lesi silwane ungagcina zisezikhathini inja ngisho noma lokho kusho ukulahlekelwa ukuphila kwakhe.
Indlovu unekhono eliyingqayizivele ukufunda, Uyaphinda umyalo zabantu futhi sidlala nabo.
Ukuxhumana usebenzisa 470 izindlovu amasignali esitebeleni. Ukusebenzisa i-ultrasound, baxwayisa nomunye ingozi.
Izindlovu zigcine amasiko kaKhesari ecabangela ukungcwatshwa kwami. ilungu oshonile ka zomhlambi bangcwatshwe futhi wambozwa ngamatshe, futhi izinsuku ke ezimbalwa ayehlezi phansi, eveza ukudabuka.
Ezinye amaqiniso athakazelisa ngempela izindlovu
Lena akuyona zonke izici zokuphila izindlovu, okungase kusimangaze. Lokhu okulandelayo kuzonisiza ukwethula amanye amaqiniso athakazelisayo kabanzi mayelana nezindlovu:
Ukunuka indlovu izikhathi 4 namandla kunomFilisti ukuthi izinja sniffer, ngenxa kwezigidi ezingu yokwamukela amaseli elise elingenhla acinene ingaphakathi besikhumba saleso silwane.
Kodwa amehlo wezindlovu akuyona njengoba abukhali. Bheka into abangakwenza kuphela at ibanga 20-25 m. Endulo, ama-abazingeli wayehlezi ezinokuthula indlovu emuva ukungena phakathi komhlambi wezinkomo, ngifuna isilwane abasifunayo.
indlovu inhliziyo ukala 20 kg kanye nesilinganiso 30 amabhithi ngeminithi.
Ukushintsha namazinyo izindlovu ithatha beka izikhathi 6-7 empilweni.
Phakathi izindlovu kukhona kwesokudla handers washiya-handers. Lokhu kunqunywa izinyo lendlovu, okuyinto silwane sikhetha ukusebenza.
Izindlovu ukulala amahora angaba ngu-2-3 ngosuku, futhi bachitha isikhathi esiningi ngifuna ukudla siyibonisa ngokungalidli.
Fish-hybrid: izinzuzo phezu amafomu okumsulwa. Ukusetshenziswa hybridization
Shilka River - izici eziyinhloko nokubaluleka kwezomnotho
Ukucwasana - kuyini: umsebenzi noma isidingo?
Massager "nozomi": Umhlahlandlela, ukubuyekezwa, intengo
Art. 15 Umthetho "Ngo Ukuvikelwa kwamaLungelo Abathengi. Isinxephezelo ezinkantolo
Brenda Vaccaro - Biography nemisebenzi
Izithuthi ukushaqeka wezinciphisi "Kayaba": ukubuyekezwa. Shock "Kayaba": Intengo
Lapho kwakudingeka kulungiswe le injectors?
"Dublin" - shicilela eSt. Petersburg: incazelo, imenyu, izibuyekezo
Iyini ipayipi yaseJeriko
Ngobani abalimi sathathwa? Lena Umbuzo othakazelisayo ngobujamo abalimi Russia
Konke okudingayo okokuqala ngusana olusanda kuzalwa
Indlela ukususa belly fat: Obonisa kuwo wonke